Baydin – Wun Yan
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွက် တစ်လစာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးအတွက် တနင်္ဂနွေနေ့ သားသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်မှုနှင့် ကြုံတွေ့မည်။ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ဆုံမည်။ မမျှော်လင့်ထားသောအကူညီများရရှိမည်။ ဤလတွင် အလုပ်နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်တည်း မလုပ်သင့်ပါ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်တတ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင် မနာလိုသူပေါများမည်။ ခရီးရှည် ရက်ရှည်ခရီး မထွက်သင့်ပါ။ သူများဦးစီးသောခရီးဝေး မထွက်သင့်ပါ။ အစားအသောက်မှား၍ အစာအဆိပ်သင့်တတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်နှင့်ပတ်သက်၍ အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ချစ်သူနှင့်အိမ်ထောင်မရှိသူများ ချစ်သူရည်းစား…
လက္ခဏာပညာရပ်တွက် လက်ဖဝါးပြင်ဖတ်ရာတွင် လက်ကောက်ဝတ်အခြေအနေသည် အလွန်အရေးကြီးသော အခြေအနေမှ ပါဝင်လျှက်ရှိပေသည်။ လက်ကောက်ဝတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး လူတစ်ယောက်အတွက် ထီပေါက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် အသက်ရှည်ခြင်းတို့ကို ဟောပြောနိုင်သည် ။ လက်ကောက်ဝတ်ရှိ လမ်းကြောင်းများကို လေ့လာရာတွင် လက်ပုံစံနှင့်တွဲဘက်လေ့လာသင့်ပေသည်။ လမ်းကြောင်းအားဖြင့် အနည်းဆုံး (၃) ကြောင်းပါရှိ တတ်ကြသည်။ အချို့သော လက်များတွင် လမ်းကြောင်း (၂) ကြောင့်သာ ပါရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရတတ်သလို (၃) ကြောင်းထက်များသော လက်ပိုင်ရှင်များကိုလည်း အနည်းငယ်တွေ့ရတတ်ပေသည်။…
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၆ ရက်မှ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ဒီကာလအတွင်းကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးများ ထက်မြက်နေမည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်စေ၊ သူတစ်ပါးထက် သာအောင် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိမည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလုပ်နှစ်ခုမှ အထက်သို့ ကိုင်တွယ် လုပ်ကိုင်နေရမည်။ ယုံကြည်ကိုးစား၊ အလေးထားခြင်း ခံရမည်။ လုပ်ငန်းသစ်ကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။ကိုယ်တိုင်က ကျန်းမာရေးကောင်းပေမယ့်…
အဘ မင်းသိင်္ခလမ်းညွှန်ပေးခဲ့သည့် မုချကြီးပွားတိုးတက် အောင်မြင်ချမ်းသာစေသော ဝါတွင်းကာလ ပွဲတွေ့ချမ်းသာ ဓာတ်ရှင်လေးပါးပူဇော်နည်း။ (က) စတင်ပူဇော်ရမည့်နေ့ – ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ (၃ – ၈ -၂၀၂၀ တနင်္လာနေ့) (ခ) နောက်ဆုံးပူဇော်ရမည့်နေ့ – သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (၃၁ . ၁၀ . ၂၀၂၀) (နေ့စဉ်ပူဇော်ရန်) (ဂ) ပူဇော်ရမည့်အချိန်နာရီ – နံနက်ငါးနာရီခန့် (အရုဏ်ဆွမ်း) အတိအကျပြုလုပ်လိုပါမူ…
လင်အမျိုး သား ဘီယာ အရက်သောက်လာလို့ စိတ်ညစ်နေရပါသလား။ တခါမှ မသောက်ဖူးတဲ့ အမျိုးသား သောက်လာတာသိလို့ ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲ စိတ်ညစ်နေရပါသလား။ ချစ် ရယ် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တခါတရံ ပျော်လာခဲ့တာပါကွာဆိုပြီး အကြိမ်ကြိမ် သောက်တာများလာလို့ စိတ်ညစ်နေရပါသလား။ ဟေ့ နင့်ယောကျ်ား အရင်တုန်းက မသောက်ဘူး အခု သောက်တတ်လာနေပြီနော် ဆိုပြီး အပြောခံနေရ မျက်နှာငယ်နေရပါသလား။ သောက်စားမူးပြီး အိမ်မှာမိသားစုကိုရမ်းကား ရန်ရှာ…
အင်္ဂဝိဇ္ဇာနည်းအရ သင် ဘယ်အလုပ် နဲ့ ကြီးပွား တိုးတက်မလဲ
မြန်မာ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာ ပညာခန်းလေးဆိုရင် မမှားဘူးပြောလို့ ရသလို လွယ်ကူရိုးရှင်း ထိရောက်သေ ာနည်းလေးတစ်ခုဆိုသည်ကို ငြင်းဖွယ်ရာပင် မရှိနိုင်ရလောက်အောင် ကောင်းမွန်သော ပညာရပ်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက် မည်ကဲ့သို့သော အလုပ်အကိုင်မျိုးတွေနဲ့ ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေ ရရှိစေမလဲ တိုးတက်နိုင်မလဲ သိဖို့ဆိုရင်တွက်ချက်နည်းလေးကတော့ သိလိုသူရဲ့ မြန်မာမွေးနေ့ သက္ကရာဇ်ကို တည်ပြီး (၇) နှင့်စားပါ။ ၂ ကြွင်းခဲ့ရင် တနင်္ဂနွေနံနဲ့ ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း ၃…
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်မှ ၂၂ နေ့အထိ ဟောစာတမ်း
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်မှ ၂၂ နေ့အထိ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီကာလအတွင်း အကွက်ကျော်၍ ကြည့်မြင်သုံးသပ်လုပ်ကိုင်မှုတို့ကြောင့် အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ စိတ်ရှည် သည်း ခံ အောင်ပွဲခံရတတ်ချိန်မျိုးပါ။ တပည့်ကောင်း၊ အခြွေအရံကောင်းများ ရမည်။ လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် စီးပွားဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မည်။ လောဘကြောင့် သောကကြုံရတတ်သည်။ အရာရာကို သင့်တင့်မျှတစွာ နှလုံးသွင်း လုပ်ကိုင်ပါ။…
မကောင်းသော အတတ် ပညာ အတိုက် အခိုက် များ ရန်များ မှ ကင်းဝေးရအောင်
မကောင်းသော အတတ်ပညာ အတိုက်အခိုက်များရန်က ကာကွယ်ဖို့” မိတ်ဆွေတို့ကိုသော်၎င်း ၊ မိတ်ဆွေတို့၏မိသားစုများကိုသော်၎င်း ၊ မိတ်ဆွေတို့၏ နေအိမ် ၊ ခြံဝန်း ၊ တိုက်ခန်း ၊ ဈေးဆိုင် ၊ ရုံးခန်း ၊ လုပ်ငန်း ၊ အလုပ်ရုံ ၊ ယဉ်ကား စသည်တို့ကို … ။ အတိုက်အခံအပြိုင်အဆိုင်များကသော်၎င်း ၊ မနာလိုမုန်းတီးသူများကသော်၎င်း မကောင်းသောအတတ်ပညာများနှင့် ပြုစားစီရင်…
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဤ အချိန်သည် အမှားအမှန်၊ အကောင်းအဆိုးကို ခွဲခြားရခက်သောကာလဖြစ်သည်၊၊ရှေ့တိုးရအခက်၊ နောက်ဆုတ်ရအခက် ပြဿနာများကြုံရတက်သည် အရာရာသတိထား၍လုပ်ကိုင်မှတော်ကာကြသည်၊၊ ယခုချိန်မှစ၍ မိမိလုပ်ဆောင်မည့်အရာအားလုံးကို အကွက်ချပီးလုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားသင့်သည်၊၊ မိမိ၏ ဇွဲ၊လုံလပေါ်မူတည်၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်၊၊ စကားအပြောဆို ဆင်ခြင်သတိပြုရပါမည်၊၊ နှုတ်ကြောင့်သေ၊လက်ကြောင့်ကြေ တတ်သော ကာလဖြစ်၍ နှုတ်မထိန်းပါကကြီးစွာသော ဥပဒ်ဖြစ်တက်သည်၊၊ ငွေများဝင်သောလည်း အဖတ်မတင်တက်ပေ၊၊အလိုလိုနေရင်း စိတ်အားငယ်တက်သောစိတ်၊တက်လွယ်ကျလွယ်သောစိတ်ကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပါလေ၊ မိမိ မလုပ်ချင် မဖြစ်ချင်သောကိစ္စကို တစ်စုံတစ်ယောက်မှ အတင်းအကြပ်၊…
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီကာလအတွင်းစီးပွားဝင်ငွေ အနည်းငယ်ညံ့နေတတ်သည်။ ပြည်ပနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တွင် အပြောင်းအလဲတစ်စုံတစ်ရာရှိနေမည်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ဌာနအတွင်း အဆင်မပြေခြင်း များ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်ပြောဆိုထားသော အိုး၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အရောင်းအဝယ် ကိစ္စများ မမျှော် လင့်ဘဲ…